Home तपाईको गृह कार्यालय सजावटका लागि सजिलो युक्तिहरु - साम्प्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B5B बजार समाचार
जनवरी 20, 2021 जनवरी 19, 2021 पाइज वाल्टर अरबी फ्रीलान्स, शुरुआतीहरूको लागि सर्वश्रेष्ठ फ्रिल्यान्स वेबसाइटहरू, ब्लग, व्यापार, चीनियाँ स्वतन्त्रता, विशेष समाचार, FGG कम लागत बजार, फ्रीलान्स ग्लोबल गिग (FGG) कम लागत बजार, फ्रेन्च फ्रीलान्स गिग, हिन्दी फ्रिल्यान्स गिग्स, इन्डोनेसिया फ्रीलान्स गिग्स, पोर्तुगाली फ्रीलान्स गिग्स, रसियन फ्रीलान्स गिग्स, स्पेनिश फ्रीलान्स गिग, प्रविधि
भित्ता कला सस्तो छ, कम ठाउँ लिन्छ, र कोठामा आरामदायी र मैत्री भावना ल्याउँछ।
तपाईंको घरमा एक सफा र उज्यालो ठाउँ उत्तम स्थान छ। चम्किलो र colors्गको थोरै मिश्रण क्षेत्र भित्र लामो दुरी जान्छ।
डेस्क आयोजक हुनु आवश्यक छ।
हामी आफ्नो जीवनको अधिकांश समय हाम्रो कार्य कार्यालयहरूमा खर्च गर्दछौं। यदि तपाईं घरबाट काम गर्दै हुनुहुन्छ भने, गृह कार्यालय रचनात्मकता, उत्पादकतालाई प्रेरित गर्न र तपाईंलाई व्यवसायमा तल झार्न प्रेरित गर्न उपयुक्त हुनुपर्छ। कार्यालयको दृष्टिकोणले कसरी एक महसुस गर्छ र काम गर्ने घण्टाको बेला सोच्दछ। घरबाट काम गर्ने अधिकांश व्यक्तिहरूसँग खाली ठाउँहरू छन् जुन गन्दा र प्रेमहीन छन्। गृह कार्यालय सजावटले एक कार्यमा उत्प्रेरित र पूरा रहन मद्दत गर्दछ। निम्न सजाउने विचारहरूको साथ तपाइँको कार्य गर्ने ठाउँमा सकरात्मक परिवर्तन गर्नुहोस्:
१. ग्यालरी भित्ता
भित्ता चित्रहरु घर कार्यालय सजावट को लागी एक मान हो। तिनीहरू उत्तम र न्यूनतम तरीकामा वातावरण कब्जा गर्न मद्दत गर्दछ। तपाईं ग्यालरीको पर्खाल घुसाएर डेस्कको माथिको सानो कार्यालय भित्तामा रमाईलो र व्यक्तित्व थप्न सक्नुहुन्छ। यसले एकलाई सबै मनपर्ने प्रिन्टहरू एकै ठाउँमा प्रदर्शन गर्न र कार्यालय सेटअपमा भिजुअल रुचि थप्न अनुमति दिन्छ। भित्ता कला सस्तो छ, कम ठाउँ लिन्छ, र कोठामा आरामदायी र मैत्री भावना ल्याउँछ। तपाईं पनि आफ्नो बाहिर काट्न सक्नुहुन्छ विनाइल डिजाइन भित्तामा तपाईंको आफ्नै व्यक्तिगत शैली ल्याउन। सबै विषयवस्तु एकै ठाउँमा प्रदर्शित हुने कुरा सुनिश्चित गर्न साझा विषयवस्तु सेट गर्नु आवश्यक छ।
क्षेत्रको छनौट गर्नुहोस् जहाँ तपाईं दिनको राम्रो भागमा सूर्यको प्रकाश पाउन सक्नुहुन्छ।
२. र Color र प्रकाश
तपाईंको घरमा एक सफा र उज्यालो ठाउँ उत्तम स्थान छ। चम्किलो र colors्गको थोरै मिश्रण क्षेत्र भित्र लामो दूरी जान्छ। बिभिन्न रंगहरूको विभिन्न मनोवैज्ञानिक प्रभावहरू र अर्थ छन्। एकाग्रताको लागि सुन्दर प्रवाह निर्माण गर्न उत्तम रration्ग योजनाहरूको संयोजन छनौट गर्नु उत्तम तरिका हो। प्राकृतिक प्रकाश प्रत्येक कार्यालय स्थानको एक महत्वपूर्ण पक्ष हो। क्षेत्रको छनौट गर्नुहोस् जहाँ तपाईं दिनको राम्रो भागमा सूर्यको प्रकाश पाउन सक्नुहुन्छ। कृत्रिम प्रकाश स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ किनभने यसले गर्दा आँखोलाई असर गर्ने तनाव उत्पन्न हुन्छ। विन्डोको नजीकको स्थान प्रकाश प्रवेशका लागि उत्तम विकल्प हुनेछ।
Color. रंगीन डेस्क आयोजक
अफिस अफिसरी स्टोर भण्डारण कार्य परिचालनको लागि उत्तम हो नतिजाको रूपमा, यो एक डेस्क आयोजक संग आवश्यक छ। तपाईं दैनिक आवश्यक आवश्यक भण्डारण र स्टेशनरीको लागि एक सानो फाइलिंग क्याबिनेट समावेश गर्न सक्नुहुन्छ। यसले एकलाई फरक कागजी कार्यहरू राख्न र सजिलो पुनःप्राप्तिका लागि रिपोर्टहरू मद्दत गर्दछ। राम्रो संग व्यवस्थित अफिस डेस्क डेस्क आयोजक संग, एक अपडेट र व्यवस्थित रहन सक्छ। तपाईं भ्रमबाट जोगिन पहिले गर्नुपर्ने कार्यहरूको सूची सेट गर्न सक्नुहुन्छ। यो एक पेशेवर कार्यक्षेत्र कायम राख्नका लागि उत्तम तरिका हो।
D. समर्पित कार्य-देखि-घर कार्यालय फर्नीचर
कार्यालय फर्निचर प्रत्येक कार्यक्षेत्रमा एक अनिवार्य घटक हो। एक डेस्क एक चीज हुनुपर्दछ जुन स्टाइलिश र आरामदायक हुनुपर्दछ। त्यहाँ धेरै टिकाऊ र रमणीय फर्नीचर छ जुन विभिन्न कोच, कुर्सी र कम्प्युटर डेस्कबाट छनौट गर्न सकिन्छ। त्यहाँ विभिन्न प्रकारका कुर्सीहरू छन्; बहुविध कारकहरूले तपाइँले छान्नु भएको कुर्सीको शैलीलाई प्रभाव पार्दछ। काम गर्ने समयमा आराम र कम तनाव सुनिश्चित गर्न काठ समायोजनको साथ अफिस कुर्सी छनौट गर्नुहोस्।
Ind. भित्री बोट / फूलहरू
इनडोर बोटहरू समावेश गर्न एक उत्तम विचार हो किनकी यसले कार्य तनाव ह्यान्डल गर्न मद्दत गर्दछ। प्रकृति चिन्ता कम गर्ने उत्तम तरिका हो। बोटबिरुवाहरुमा आकर्षक र मीठो गन्ध पनि छ जुन एक कामको घडीमा प्रेरित हुन्छ र सास फेर्न ताजा हावा प्रदान गर्दछ। केही किफायती भादाहरू पाउनुहोस् र तिनीहरूलाई अफिसको वातावरणको वरिपरि राख्नुहोस् यसलाई ताजा र जीवन्त राख्न। यो एक उत्तम सजावट हो अफिस सेट अप राख्नको लागि भव्य र आकर्षक।
तपाईंको गृहस्थी भित्र समर्पित कार्यक्षेत्रले एकलाई व्याकुलता छुट्याउन र काममा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्षम गर्दछ। यो पहिलो प्रभाव हो कि एक आफ्नो परिसरमा उनीहरूको मार्गमा बनाउँछ। तसर्थ, माथि उल्लेखित सजावटको साथ सबै भन्दा राम्रो र आकर्षक घर कार्यालय दृष्टिकोण सेट गर्न यो सधैं महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
सांप्रदायिक समाचार गृह कार्यालय